Vaccine über alles: Ụlọ ahịa dị na Hesse nke Germany ugbu a nwere ike machibido ndị ahịa niile agbabeghị ọgwụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Vaccine über alles: Ụlọ ahịa dị na Hesse nke Germany ugbu a nwere ike machibido ndị ahịa niile agbabeghị ọgwụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Vaccine über alles: Ụlọ ahịa dị na Hesse nke Germany ugbu a nwere ike machibido ndị ahịa niile agbabeghị ọgwụ.
Enyerela nnukwu ụlọ ahịa dị na Hesse, Germany ikike ịgọnarị ikike ịzụrụ nri na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
N'okpuru iwu ọhụrụ, ụlọ ahịa dị na Hesse, Germany nwere ike ikpebi ma a ga -etinye '2G iwu'.
Na mgbakwunye na nhọrọ 2G ọhụrụ, a ga-enyocha ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na-ejighi ọgwụ mgbochi maka Covid-19 ugboro abụọ n'izu.
Hesse bụ steeti German izizi kwere ka iwu dịrị n'ụlọ ahịa nri na ụlọ ahịa ndị ọzọ na -ere ahịa.
Nnukwu ụlọ ahịa dị na Hesse, Germany Enyerela ikike ịgọnarị ikike ịzụrụ nri na ihe ndị ọzọ dị mkpa, na -eme Hesse steeti German mbụ iji nye ohere ka ụlọ ọrụ gọnarị ohere ịgba ọgwụ mgbochi ọbụlagodi ihe ndị dị mkpa.
Minista Hesse-Onye isi ala Volker Bouffier
Iwu ọhụrụ ahụ nke na -esetịpụ ụkpụrụ na -enye nsogbu ka ndị agbata obi ya na -agbagha ngagharị iwe megide ikike ịgba ọgwụ mgbochi ka ndị isi ọchịchị steeti kwadoro.
N'okpuru iwu ọhụrụ, ụlọ ahịa nwere ike ikpebi ma ha ga -emejuputa '2G rule', nke pụtara ikwe ka nbanye banye naanị ọgwụ mgbochi ma gbakee ('geimpft' na 'genesen' na German) ma ọ bụ karịa 'iwu 3G', gụnyere ndị anwalela ihe ọjọọ maka nje (getestet).
Minista Hesse-Onye isi ala Volker Bouffier kwuru na ya nwere olile anya na a gaghị etinye iwu ọhụrụ ahụ ebe niile, na -akọwa: "Anyị na -atụ anya na a ga -eji nhọrọ a ụbọchị ole na ole yana azụmahịa ndị na -egbo mkpa kwa ụbọchị agaghị eji ya."
“Nchedo kasịnụ bụ site n'ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ihe na -agbagwoju anya, enweghị usoro ọchịchị na nweere onwe ya ịnweta, "Herr Bouffier kwuru, na -arịba ama na ihe mkpuchi anya na ihe ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ga -adị maka azụmahịa ndị na -anabataghị iwu 2G ọzọ.
N'ịgbanwe maka ịnabata naanị ndị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị gbakere, a na -ahapụ ụlọ ọrụ 2G ka ha hapụ ịhapụ ịdịpụrụ adịpụ na iwu mkpuchi ihu - ikekwe ahịa azụmaahịa mgbe ọnwa 18 nke mkpuchi ihu siri ike.
Na mgbakwunye na nhọrọ 2G ọhụrụ, a ga-enyocha ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na-ejighi ọgwụ mgbochi maka COVID-19 ugboro abụọ n'izu, a ka ga-achọkwa ka ụmụ akwụkwọ kpuchie ihu mgbe ha nọ ọdụ na klaasị.
Mgbe ọ dịkarịa ala asatọ ọzọ German steeti emepeela nhọrọ 2G maka ụfọdụ azụmaahịa dị ka ụlọ mmanya, ụlọ nri, gyms, sinima na ụlọ akwụna, Hesse bụ onye mbụ kwere ka iwu dịrị n'ụlọ ahịa nri na ụlọ ahịa ndị ọzọ na -ere ahịa.
Ọ bụ ezie na mba ndị ọzọ dị na Europe dị ka Italy na France etinyerela ọgwụ mgbochi siri ike na -amachibido ndị a gbara ọgwụ mgbochi ịrụ ọrụ (Italy) ma ọ bụ rie nri na cafes (France), ọtụtụ ndị isi akwụsịla inye iwu maka ụmụ amaala ha.
Wepụ nje COVID-19 site na iji Ionizer ikuku ọhụrụ
Mbelata ụgwọ ọrụ ndị njem UK na-enye nkwalite ọhụrụ maka ikuku ụlọ…
Sandals Foundation na-akpali olileanya ọhụrụ na Jamaica
Steeti “Hesse” na Germany na -enye ikike maka nnukwu ụlọ ahịa iji machibido ndị ọgwụ mgbochi ọrịa - Prussian Society of America ekwu, sị:
October 17, 2021 na 02: 52